Dredging ao amin'ny Clam Pass hamerenany ny ala Ala - Ellicott Dredges
Manomboka ny asa fanoratana ao Clam Pass, Florida hamerenany indray ny ala honko maty
Loharano: Eric Staats, Naples Daily News
Miaramila avy Ludlum Construction Company dia manomboka manomboka manompa fasika ivelan'ny Clam Pass anio ho ampahany amin'ny ezaka famerenana indray ny ala honko maty any avaratr'i Collier County, ny talen'ny fizaram-pirenena nanara-maso ny tetikasa hoy ny alatsinainy.
Ny drafitra famerenana amin'ny laoniny dia mikendry ny fampitomboana ny rano mikoriana miditra sy mivoaka ny Clam Bay, toerana namonoana honko maherin'ny 50 hektara ny tondra-drano nanomboka ny taona 1992 teo ambanin'ny lavarangana fitahirizam-be any Pelican Bay.
Ny asa Clam Pass dia ampahany faharoa amin'ny famerenana amin'ny laoniny. Crews dia efa nahavita nihady valan-javaboary tany amin'ny ala avaratr'i Clam Pass ary efa natomboka ny hanapahana roa hafa tamin'ity herinandro ity, hoy i Jim Ward, talen'ny Sampana Serasera any Pelican Bay.
Ny fanapahana ny rano sy ny fanodinana ny fantsona lehibe dia mitentina 500,000 100,000 $. Ny vola miditra amin'ny hetra ataon'ireo mpizahatany dia haka ny takelaka fanaovana kery ny Clam Pass, $ 2.4. Ny ambiny dia haparitaka amin'ireo mponin'i Pelican Bay, amin'ny alàlan'ny distrika fandoavan-ketra manokana, sy ny WCI Communities, mpamorona ny Pelican Bay. Ny famerenana amin'ny laoniny - ao anatin'izany ny fandalinana ireo fomba hampihenana ny ranomasina any Clam Bay - dia andrasana $ XNUMX tapitrisa amin'ny fotoana vita.
Ny asa dia tsy maintsy vita amin'ny May 1, fanombohan'ny vanim-potoanan'ny akany an-dranomasina izay miato ny asa amoron-dranomasina isan-taona ka hatramin'ny Novambra. Nilaza i Ward fa tsy andriny ny hahatongavan'ny fe-potoana.
Neken'ny komisim-paritra ny fandavoana ny fetran'ny fotoana fananganana mahazatra mba ahafahana miasa mandritra ny ora 24 isan'andro. Afaka manomboka ny roa herinandro izany, hoy i Ward.
Mpanorina ny vondrona Mangrove Action Group, vondrona olom-pirenena nahatsikaritra ny ala efa nivadika volontany ary nivondrona mba hanosika ireo tompon'andraikitra hanavotra azy, dia nitehaka ny fiantombohan'ny asa. "Heveriko fa mandroso tokoa izy ireo," hoy i Claire DeSilver, izay nitandrina hatrany ny ezaka fanarenana ny ala hatramin'ny voalohany. “Heveriko, amin'ny ankapobeny, tena faly ny olona mandroso.”
Nilaza i Ward fa matoky ny fahombiazan'ny tetikasa izay natambatry ny ekipa mpahay siansa sy hidrôloôlôjôpika ary efa nandinika volana maromaro ny masoivoho mpahazo alalana avy amin'ny fanjakana sy federaly.
Ny ampahany hita indrindra amin'ny tetikasa dia ny fanondranana ny Clam Pass.
Ellicott® Marika 370 “Dragon®”Dredge sy fitaovana telo mihetsiketsika amin'ny tany nipetraka niandry ny alatsinainy teo tao Clam Pass. Ny tsipika fantsona dia namelatra ny morontsiraka ary nandalo ny Clam Pass Park, izay hanondrahana ny fasika ary hiparitaka amin'ny morontsiraka. Ny mpiasa dia nandevina ny fantsona teo amoron'ny morontsiraka mba hahafahan'ny mpandeha an-dranomasina hiditra.
Tokony ho roapolo eo ho eo no voatery nifindra toerana mba hialana lavaka roa nolavina tany avaratr'i Clam Pass tao anaty faritra fitehirizana fananana iray izay natokana nandritra ny fananganana ny Pelikan Bay, hoy i Ward.
Notsongaina avy amin'ny: Naples Daily News